Intel haichazovaka fekitori yayo muUK nekuda kweBrexit | Linux Vakapindwa muropa
Intel CEOPat Gelsinger Akataura kuti UK isati yabva muEU, nyika 'ingadai yakave saiti yatakatarisa'. Asi akawedzera kuti: "mushure meBrexit ... tiri kutarisa nyika dzeEU nekutsvaga rutsigiro rweEU."
Uye ndeyekuti Intel inoda kuwedzera kugadzirwa kwayo mune yekushomeka kwepasi kwese machipisi Yakabata zvikamu zvakawanda, kusanganisira indasitiri yemotokari. Inintel, inova ndeimwe yevagadziri vepasi rose semiconductor vagadziri, Anoti dambudziko rakaratidza kuti United States neEurope vanovimba zvakanyanya neAsia nekuda kwavo kwekugadzira chip.
Mukutaura kwake kwekutanga kubva zvaakatora nzvimbo semutungamiriri weIntel muna Kukadzi, CEO Pat Gelsinger akafanotaura kuti semiconductors ichaumba zvinopfuura makumi maviri kubva muzana zvemazita emota ekutanga emota na20.
Ichi chiyero chekukura kakapetwa kashanu pane iyo 4% nhamba muna 2019. Parizvino, vashoma chete vemakambani vakakwanisa kubatanidza matekinoroji anodikanwa kutema zvidiki zvidiki uye zvidiki kuita silicon, uye kugona kweanonyanyisa ultraviolet lithography. TSMC's (EUV ) akamubatsira kumubata kumberi kwepakeji.
Iyo Taiwanese kambani uye yekuSouth Korea kambani Samsung ndiwo chete makambani maviri eemiconductor parizvino ari kushandisa UVU kugadzira logic machipisi. pamwero wezvekutengesa, uye TSMC (Taiwan Semiconductor Inogadzira Kambani) inotungamira kumberi, ine inopfuura 80% yekugadzirwa kwenyika.
"Kushomeka kwaSemiconductor kuchakanganisa zvakanyanya kupa uye kudzikisira kugadzirwa kwemhando dzakawanda dzezvigadzirwa zvemagetsi nemidziyo muna 2021," Kanishka Chauhan, muongorori mukuru weGartner, akadaro muna Chivabvu. "Vanotangisa vanokwidza mitengo yechingwa uye vanogadzira machipisi vachikwidza mitengo yezvinhu," akawedzera.
Intel yakazivisa muna Nyamavhuvhu kuti yainge yawana kontrakiti yebasa kukanda sechikamu cheDhipatimendi reDziviriro chirongwa chekutsigira advanced semiconductor kugadzira muU.S. Mukukakavadzana kwayo mukufarira chirongwa ichi, Intel inoti "United States iri kusarira kumashure mukugadzira semiconductor uye Congress inofanira kuita izvozvi kuti igadziriswe."
Intel haisati yaunza UVU mukugadzirwa kwechero ipi zvigadzirwa zvayo zvekutengesa, uye haizotore tekinoroji iyi kusvika padanho repiri ra2023. Zvichakadaro, TSMC yakazivisa gore rakazotevera kuti yaive ne50% yemachina ese eEUV uye yaigadzira 60% yezvingwa zvese zvakagadzirwa neiyi tekinoroji. iwo mukana mukuru.
MunaGunyana, Gelsinger akayeuka kuti Intel inoronga kuvaka dzinenge mbiri mafekitori eemiconductor chizvarwa chekupedzisira muEurope, nezvirongwa zvekudyara mune ramangwana zvinogona kusvika makumi masere emamiriyoni emadhora mumakore gumi anotevera. Akajekesa zvakare zvinhu zvechisimba zvakaziviswa nekambani uye akatsanangura mashandisiro emapurogiramu aya kunyanya kumaindasitiri emotokari nekufambisa muEuropean Union.
Intel Foundry Services, yakaziviswa munaKurume, vari kushingairira kuita hurukuro nevangangove vatengi muEurope, kusanganisira makambani emota nevatengesi vawo. Nhasi, mazhinji emachipisi emota anogadzirwa vachishandisa ekare maitiro tekinoroji. Sezvo zvishandiso zvemotokari zvinoenderana neakakwira ekugadzirisa mashandiro, machipisi ari kutanga zvakare kutamira kune epamberi ekugadzirisa matekinoroji.
Intel iri kudyidzana nevatambi vakuru muindasitiri yemotokari uye kuita zviwanikwa zvakakosha muEurope kukurudzira shanduko iyi kutenderera pasirese mumakore mashoma anotevera. Iyo kambani yazivisa hurongwa hwekumisikidza yakazvipira foundry kugona kune yayo fekitori muIreland. uye kuvhura iyo Intel Foundry Services Accelerator kubatsira mota chip vagadziri kuenda kune epamberi node. Kuti zvibudirire izvi, Intel yakagadzira timu nyowani dhizaini uye inopa yakajairwa uye tsika IP kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi vemotokari.
Intel CEO inofungidzira tekinoroji yedhijitari ichawedzera semiconductor mugove wezvese nyowani-yekupedzisira mota zita remazita kusvika anopfuura 20% na2030, kanopfuura ka5 zvakapetwa kanokwana 4% mu2019 Mota yemotokari yesilicon inogadziriswa misika inozopeta zvakapetwa kaviri pakupera kwe gumi kusvika $ 115 bhiriyoni, kana ingangoita 11% yemusika wese wesilicon.
Kuzadzikisa kudiwa kuri kukura, Intel inoronga kuvaka michina mitsva yekugadzira machipisi muEurope, kusimbisa nzvimbo yekuzvitsvakira panzvimbo yayo yeIrish, uye kuvhura iyo Intel Foundry Services Accelerator kubatsira vatengi vekutora kutora dhizaini dzemotokari kunzvimbo dzakakwira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Intel haichazovaka yayo UK fekitori nekuda kweBrexit
Muenzaniso wakajeka wekuti vasina hunyanzvi vezvematongerwo enyika vanogona sei kunyudza nyika ine hupfumi. Kubva pane jerk ine zoophilic kutsamira saCameron, akashevedza referendamu kuti abude, kuratidzira kuti asabude uye ozorasikirwa nereferendamu. Kubva kuEurosceptics iyo yakaratidzira pahwaro hwekunyepedzera uye kunyepa uye nemhando dzese dzisina maturo dzakaisa UK kumucheto kwegomba rakadzika. Kuti EU ndeye megalithic monstrosity izere nehuwori uye zvipembenene zviri pachena, asi munyika yepasi rose ine zvayakanakira. Izvo zvaive zvakafanira kurwira kuti uchinje chimiro kubva mukati uye zvimwe nesimba iro UK irinaro asi ivo vakasarudza vevoruzhinji chiyero vachifunga kuti vaizomutsiridza mbiri dzakapfuura. Yakanga iri mhosho uye tichaona kwazvinovatora.